Ogige ntụrụndụ ọhụụ, obodo na ogige ubi site na CITY FORM DESIGN
Ogige ntụrụndụ ha bụ ihe dị oke mkpa Obere ụlọ ime obodo. Site n'echiche nke ọrụ ịba uru, a na-eji ha maka ịnọdụ ala, mana na-eburu n'uche atụmatụ gbasara ohere, ha bụ arịa ụlọ dị n'obodo ukwu. Ogige, ogige, ubi, okporo ụzọ na nkwụsị obodo nwere oche.
N’uzo sara mbara, oche bụ ihe a na-ejikarị emebere ụlọ, ọ bụghị naanị n’ogbe na ogige. Anyị nwekwara ike ịchọta bench dị iche iche n’ámá egwuregwu, n’ihu usoro amphitheater, n’ememe ụlọ akwụkwọ, n’ụlọ ụka, n’ili ozu na n’ọtụtụ ebe ndị ọzọ.
Ogwe obodo bụ olulu maka ụkwụ gwụrụ ike nke ije ogologo, yana ohere iji kwụsịtụ, nke nwere ike ịbụ emume maka nkwuputa ịhụnanya. N’egwuregwu n’abụghị nke ọma, bench obodo bụ naanị ihe ndị a na-akọ ugbo na ebe a na-adọba ụgbọala, nke na-enweghị nke o siri ike iche n'echiche gburugburu ebe a na-egwu egwuregwu, n’ime ime obodo, mpaghara ọdọ mmiri ma ọ bụ ebe ọhaneze.
Anyị na-eji oche ntụrụndụ dị iche iche site na ịnọdụ anwụ anwụ n'ogige ifuru, na-enwe mkparịta ụka na enyi anyị n'ogige ahụ, na-agụ akwụkwọ n'akụkụ ọdọ mmiri ma ọ bụ na-ele nwatakịrị obi ụtọ na-enwe ọmarịcha egwuregwu. A sị na ọ bụghị maka oche ogige, ohere a na-enwe n'obodo ukwu ga-abụ nke dara ogbenye na nke na-agaghị enwe nnukwu ọrụ.
Oche ogige obodo
Enwere ọtụtụ ụdị oche obodo. Candị ha nwere ike ịche iche n'ihi ebe ha na-aga, ihe ha na-ewu, ihe ndị ejiri rụọ ya, yana ụdị na ụdị ha.
N'ihi nhazi ma ọ bụ nzube, anyị nwere ike ịmata ọdịiche oche oche, a na-akpọkarị bench bench, ogige oche na ogige oche.
N'ihi owuwu ahụ, ya bụ, ihe owuwu ahụ, ọ na-apụ apụ oche ndị na-enweghị azụ azụ ma ọ bụ oche nwere backrest. Benches guzo na anọ ma ọ bụ karịa n'ụkwụ, na-na-adịgide adịgide jikọrọ ala na ha dum elu.
N'ihi ụdị ihe owuwu na imecha, a na-ekewa bench bench na-egwu nchara ígwè, nchara oche - bench ndị e ji ígwè rụọ, ihe oche, bench ndị sitere na ihe a na-ahụsi ike siri ike, oche bench ma ọ bụ oche bench.
N'ihi ụdị na usoro a, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị iche iche nke oche ogige dị iche iche. Mbibi kachasị mfe gụnyere oche oche ọgbara ọhụrụ na oche ọdịnala, ndị a na-ejikarị ụdị ejiji oge ochie ma ọ bụ dabara na ụlọ ndị gbara ya gburugburu na ihe ndị ọzọ Obere ụlọ ime obodo.
Ogige ntụrụndụ kachasị mma
Ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ bench n'oche? E nwere ọtụtụ njirisi. N’okpuru, anyị na-ewetara ihe kachasị mkpa n’ime ha.
Oche ndị dị ọnụ ala ogige? Ọnụahịa
Dị ka ọ dị n'ụdị ịzụta ma ọ bụ itinye ego ọ bụla, ọnụahịa ngwaahịa na-abụkarị otu nhọrọ njirisi. N'okwu a, ọnụ ahịa ogige oche a na-akwụ ụgwọ na-adaberekarị n'ihe eji eme bench ahụ, yana akụkụ ya. Bench bench dị ọnụ ala bụ ụlọ a na-ejikarị ígwè. Ndi kacha nta ga-adi ọnụ ala. Oche ibu ka ukwuu, a na-eji ihe ndị ọzọ emepụta ya, yabụ ọnụahịa na-abawanye.
Oche nche nke obodo
Ihe dị na bench ahụ, karịa, bụ nchekwa maka ndị okenye na ụmụaka. Ọdịdị ya ga-abụrịrị ntụkwasị obi ma nwee ike ịdabere na ya ka nchekwa nke iji akụrụngwa okporo ụzọ a ghara ibelata iji ya.
Ọ bụ ezie na enweghị ụkpụrụ Poland ọ bụla ga-emetụta ihe na-adọba ụgbọala, e nwere ihe ndị yiri ya ndị a ga-agbaso mgbe a na-echepụta ma na-ewu oche oche. Standardkpụrụ a na-ejikarị bụ PN-EN 1176 maka akụrụngwa egwuregwu.
Akwụsi ike nke oche oche
A na-ekpughere ngwongwo ndị dị n'ebe ọhaneze. Ya mere, oche ogige na-enwekarị usoro mgbochi vandal. Ọ bụ mgbakwunye nke bench a na-eli n'ime ala, na-egbochi egbochi ịmegharị bench, zuru ma ọ bụ ụdị mbibi mbibi ọ bụla ọzọ.
Bench nwere ihe mkpofu
Mgbu ahịhịa na-abụkarị ihe na-enweghị atụ na bench bench. Enwere ike ijikọ ya na bench dị ka isi ya. O nwere ike ịbụ ihe dị iche na-ewu ụlọ, ma mgbe ahụ ọ ga-eji nlezianya họrọ ya ma na-elekwa anya na atụmatụ bench.
Enwekwara ike idobe oche ogige ma tebụl, ntụgharị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ha na-enye ebe maka akpa, akpa na akpa ha. Ha ga enyere gị aka zuru ike iwere akwụkwọ, debe ihe ma ọ bụ rie nri n ’ọnọdụ ndị ahụ n’ebe a na-ere nri. N'ime ogige, a na-ejikarị oche oche na tebụl ndị bụ ebe egwuregwu cheesi, checkers ma ọ bụ egwuregwu ndị ọzọ. Oche ndị a nwere ike ịnwe ọkụ nwere njikọ dị ka oriọna. Ha nwere ike ịbụ akụkụ nke arbor, isi iyi, ihe ọkpụkpụ ma ọ bụ akwa ifuru. Taa naanị ihe nro na-egbochi onye mmebe ahụ!
Ngwunye oche iron iron
Ihe ndi ozo nke carbon na ígwè bu iron. A na-ahụta ya dịka ihe eji ewu ụlọ ọfụma nke a na-eji eme ya mgbe ọ na - ebupute oche dị n'ime obodo. Ihe nkedo a na –eme ka ndi ozo di otutu. Ha nwere ihe ndozi mara mma na akwa ụkwụ pụrụ iche. Benlọ oche ndị a haziri nke ọma ga-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla, n'ihi na ị nwere ike ịhazi ọdịdị ha n'enweghị ihe mgbochi. Ngwongwo ígwè a na-eji ígwè mee bụ ihe a na-arụ n’ime obodo nke ga na-arụ ọrụ nke ọma n’ogige, ogige na square.
Ogwe ndị a na-eme ka ebe a na -eme ka ihe eji arụpụta ihe bụ ntụ ntụ, n'ihi ihe a na-eme ka ebe ahụ dị mma ma na-eguzogide ọnya.
Uru ndị ọzọ a na-enweta na tebụl ígwè ndị a na-eji ígwè eme ihe bụ ibu ha. Benlọ ndị a na-adọba ụgbọala dị arọ nke ukwuu nke na ha na-akwụsi ike ọbụlagodi na-enweghị mkpa ịzochi ha. Jumpmụaka na-amapụ na backrest agaghị adị mfe ụdị akwa dị otú ahụ, ọbụnakwa vandalsal nwere ike jụ ime ihe ọjọọ.
Oche ndị a rụrụ n’elu osisi dị mma n’anya. Ihe owuwu a na-ewu ewu na-enye ha agwa na ikike. O di nwute, dika o siri di na osisi, ana acho ndozi oge. Ọ dị mkpa ka ha na -eme ya ma na-eme ya oge niile. Lezie anya ka ị ghara ịnwe ọnọdụ ihu igwe adịghị njọ.
E kwesịghịkwa itinye oche ndị a na-adọba ụgbọala kpọmkwem na ala, ájá ma ọ bụ ahịhịa. Ha ekwesịghị abata na ala na-adịgide adịgide ma ọ bụ nke na-eme mmiri mgbe niile. Ha dị mma maka ebe ndị a pịrị apị na ndị nwere mgbidi siri ike ma na-adọ mmiri.
Oche ụwa, blọọgụ obodo ọhụụ? Ma ọ bụ ikekwe bench maka ogige nkeonwe? N'elu mbara ala? Oche ndị dị n’elu igwe na-anapụta ha. A na-eji alloys dị iche iche eme ihe maka okpokolo agba ha, nke na-adịte aka, na-adịgide adịgide na ọkụ. Ihe atụ nke ụdị ngwa ụlọ a bụ aluminom.
Oche ndị dị n’elu igwe nwere ihe ọgbara ọhụrụ. Otu n’ime uru ha bara bụ obere ume ha. Benlọ oche ndị a na-adịkwu mfe karịa ịkwaga site n'otu ebe gaa n'ọzọ. Ha nwere ike rụọ ọrụ nke ọma dị ka oche maka ndị na-ekiri arụmọrụ dị n'èzí ma ọ bụ mpempe ụlọ nke ga-agbanwe ọnọdụ ya ọtụtụ oge, dịka. dabere na oge.
Bench oche na ogige ogige
Ogige ma ọ bụ bench obodo ekwesịghị ịnwe bọọdụ, azụ ọdịnala na ụkwụ. Ọ nwere ike ịbụ ihe nkedo a kpụrụ akpụ, nke a kpụrụ akpụ ma ọ bụ nke a wapụtara na nkume. Typesdị oche ndị a dị arọ, adịghị achọ mmezi ya, ọ nweghịkwa ụlọ a na-enweghị ike ibibi. Ha nwere ike ịbụ akụkụ steepụ, isi iyi ma ọ bụ akwa ifuru. Ha na agwakọta n'ụzọ zuru oke na ihe ndị ọzọ na-ewu ụlọ.
Ngwọta ndị a ma ama na-ejikọkwa ọtụtụ ihe. Oche nwere azụ azụ na oche nwere ike ịnwe ụkwụ dị ukwu. Ihe a niile dabere n'echiche onye na - achụ ego na echiche onye okike.
ubi benchihe ocheoche osisiBench bench obodoBench benchOgige ntụrụndụoche ogigeogige ocheọnụ ụzọ ogigeogige oche oche ndepụtaoche ogige ogigeoche ogigeoche ogige obodooche ogige ogige ọgbara ọhụrụemeputa ogige ocheihe nkedo ulo ndi mmadunchara ocheIrondọ ocheoche ogige obodooche ogige ogige ọgbara ọhụrụoche dị ọnụ alaoche ogige dị ọnụ ala